Waxay ku bilaabantay buug faylalka loo yaqaan 'portfolio' oo aan qaabeynay kuna daabacnay qaybo yaryar iyadoo la adeegsanayo Iskuday (qalab kale oo weyn). Waxaan jeclaanay waayo-aragnimada immersive ee buug - miisaankiisa gacmahaaga, bogagga jilicsan ee jilicsan, iyo daalacashada xilliga firaaqadaada. Markii aan bilownay daabacaadda, wadaagista iyo FedEx'ing buugaagtan dalka oo dhan, waxaan ogaanay inaan u baahannahay qaab kale oo aan kula wadaagno waxyaabaha aan ka kooban nahay. Istaraatiijiyad daabacan oo saafi ah ayaa xadidan, ha ahaato kharash, fudayd cusboonaysiinta, ama waqtiga dirista. Waxaan dooneynay qaab aan ku gaarsiino khibrada buug, dalbashada.
Waxaan xalkayaga ka helnay Issuu, oo ah madal daabacaadda dhijitaalka ah taasoo noo suuragelisay inaan la wadaagno shaqadeena dhagaystayaal aad u ballaadhan welina aan soo bandhigno khibrad weyn. Issuu wuxuu hayaa qaar ka mid ah astaamaha si wanaagsan ugu habboon buuga jir ahaaneed (waa la quusin karaa waana la isticmaali karaa) wuxuuna ku buuxinayaa xoogagga barxad internet ah (deg deg loo wadaago, si fudud loo cusbooneysiiyo iyo qiime jaban). Soo-booqdeyaashu waxay suulka ka gali karaan nooc shaashad buuxda ah kitaabkeena khadka tooska ah (hoos ka eeg!), La wadaag boggaga (ama daabacaadda oo dhan) asxaabtooda iyo asxaabtooda. In kasta oo aan qirnay, way adag tahay in la beddelo saameynta nuqul buugga laga seexday habeen, inta badan dhacdooyinka, Issuu waa mid aad u waxtar badan oo ballaadhan - waana taas waxa nagu sii haynaysa adeegsiga aaladda.
Tags: horumarinta ganacsigaContent SuuqdigitalarrinmarketingPublishing